MELOR | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA နှင့် စူပါတိုင်ဖွန်း MELOR
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို ဦးတည်ခြိမ်းခြောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MELOR တို့ရဲ့ အခြေအနေကို ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် နံနက်ပိုင်းမှာ စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် –
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA ဟာ သိသိသာသာ အားကောင်းလာခြင်းမရှိပေမဲ့ တောင်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီး ပြန်ဆင်းလာတဲ့ အနေအထားကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ Signal #1 ပြန်ထုတ်ထားရကြောင်း သိရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ PARMA ဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရဲ့ မြောက်ဘက် မိုင် ၂၈ဝ ခန့်မှာဗဟိုပြုနေပြီး တောင်ဘက်တည့်တည့်ကို တစ်နာရီ ၇ မိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားနေကြောင်းသိရပါတယ်၊ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို ၅၅ မိုင်မှ ၇ဝ မိုင်နှုန်းအထိရှိပြီး မုန်တိုင်းဗဟိုမှာ မုန်တိုင်းဒီရေအမြင့် ၃၁ ပေအထိရှိတယ်လို့ JTWC ခန့်မှန်းချက်မှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၈ ရက် နံနက် 00 hr GMT (မြန်မာစံတော်ချိန် +၆နာရီခွဲ) အထိ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ ဝေ့ပြီး တိုက်ခတ်နေဦးမဲ့ အနေအထားကြောင့်လဲ Signal#1 ထုတ်တာလို့ သိရပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ PARMA ဟာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲကို သိသိသာသာ ရွေ့လျားဝင်ရောက်လာပြီး အနောက်ဘက်ကို ဆက်လက်ရွေ့လျားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲကိုရောက်လာပြီးတော့မှ သူဘယ်ကိုဆက်သွားပြီး ဘယ်လောက်အထိ အားကောင်းလာနိုင်မလဲ ဆိုတာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြရဦးမှာပါ။
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို ခြိမ်းခြောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MELOR ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၃ဝဝ မှာ ဗဟိုပြုနေပြီး အရှေ့မြောက်ဘက်ကို တစ်နာရီ ၁၅ မိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ MELOR ဟာ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ 00GMT (မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲခန့်) (လာမဲ့ ၄၈ နာရီအတွင်း) မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုနဲ့ နာဂိုယာမြို့ကြားကနေ ကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပြီး၊ ကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာ စူပါတိုင်ဖွန်းအဆင့်-၂ CAT-2 နဲ့ ဝင်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မုန်တိုင်း ကုန်းတွင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို ၉၆ မိုင်မှ ၁၁၆ မိုင်နှုန်းအထိရှိနိုင်ပြီး ၊ မုန်တိုင်းဒီရေအမြင့် လက်ရှိအချိန်မှာ ၃၈ ပေ အထိရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted in Education, Weather Alert, Weather News. Tags: MELOR, PARMA, super-typhoon, tropical-storm, weather. LeaveaComment »